Antanimena : nisy nitoraka grenady ny foiben’ny HVM | NewsMada
Antanimena : nisy nitoraka grenady ny foiben’ny HVM
Miverina indray ny resaka grenady! Nirefotra ary nandratra olona sy nanimba zavatra izany teny Antanimena, teo amin’ny foiben’ny HVM, ny asabotsy alina teo. Kisendrasendra sa teti-dratsy? Misy ambadika politika sa fampihorohoroana? Ao anatin’ny fanadihadiana ny mpitandro filaminana.
Asa fampihorohoroana! Feon-javatra mafy nipoaka nanaitra ny olona teny Antanimena, tsy lavitra ny foiben-toeran’ny HVM, ny asabotsy teo, tokony ho tamin’ny 10 ora alina. Fitaratra iray teo amin’ity toerana ity no vaky, ary vehivavy mpiasa alina ihany koa naratra, izay nijoro tsy lavitra teo. Nisy fiara iray nandalo ihany koa tamin’io fotoana io ka vaky ny fitaratra teo anoloany. Nalefa notsaboina ilay vehivavy naratra.
Tonga teny an-toerana ny mpitandro filaminana nizaha ny zava-misy. Raha ny fanadihadiana nandeha, voalaza fa grenady io nipoaka io. Tsy mbola fantatra ny karazany, sy ny tanjona tamin’ity toraka grenady ity. Rakotra polisy sy Emmo/Reg avy hatrany teo amin’ny foiben-toeran’ny HVM. Fantatra fa nisy roa lahy nandeha an-tongotra nandalo teo an-toerana io alina io, ka mety ireo no nanipy ilay grenady. Nisy ny fisavana ireo mpandalo rehetra teny amin’ny manodidina nanomboka teo. Hatramin’ny fiara nandalo rehetra. Tsy nisy tratra ireo nahavanon-doza.
Miverina indray ny resaka grenady rehefa nangina nandritra ny taona vitsivitsy. Manakaiky ny fifidianana, miseho sehatra ny karazana mpanao politika, ka tsy mahagaga raha mafampana ny raharaha eto amin’ny firenena. Raha ny hita aloha, ny HVM no lasibatry ny fampihorohoroana eto. Mazava loatra fa mora kokoa ny manondro molotra ny mpanohitra ho nahavaona izao, indrindra fa anatin’izao toe-draharaha manakaiky fifidianana izao.
Inona no mety haterak’iny tranga iny? Hisy olona hosamborina raha tena mandeha ny fanadihadiana lalina ataon’ny mpitandro filaminana. Miandry ny rehetra. Iza ny mpitoraka grenady? Ireo raharaha taloha nahafatesana olona tamin’ny toraka grenady, toy ny tamin’ny 26 jona 2016 toa tsy hita izay niafarany. Asa ity raha hanao ahoana, sa resaka politika fotsiny handrebirebena saim-bahoaka? Mety koa tranga niniana natao hanafoanana ny fahalalan’ny mpanohitra ny fitondrana manao hetsika an-kalamanjana…